•	Prospect, promote, identify and recruit potential clients for DAWN´s Individual Lending Unit. Conduct financial appraisal of business, follow-up clients in arrears and provision of strong customer service. Build and maintainahealthy portfolio of individual loans
•	ဤရာထူးသည် Dawn ၏ တစ်ဦးချင်းချေးငွေ ဌာနအတွက် အလားအလာရှိသော ချေးငွေယူမည့်သူများကို
•	ရှာဖွေစုဆောင်းရရှိရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာစစ်တမ်းကောက်ယူရရှိရေး၊ချေးငွေများထုတ်ပေးရန်နှင့်
•	ပြန်လည်ကောက်ခံရေး၊ ပြည့်ဝသော ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရေး၊တစ်ဦးအလိုက်ချေးငွေအရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေး
•	နှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထားသောလစဉ် နှင့် နှစ်စဉ် လျာထားချက်များ ပြည့်မီရေးအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
o	Conduct promotional activities and identify potential clients of the specific market segment for the Individual Lending Unit in his/her sales territory.
•	သတ်မှတ်ထားသော နယ်မြေဒေသအတွင်း တစ်ဦးချင်းချေးငွေဌာန အတွက်
o	ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် တိကျခိုင်မာသော ဈေးကွက်အတွင်းရှိ အလားအလာရှိသော ချေးငွေယူမည့်သူများ ရှာဖွေ စုဆောင်းရရှိရေး
o	Ensure data and information in loan applications is accurate and of acceptable quality, and ensure also authenticity of documentation.
o	ချေးငွေလျောက်လွှာတွင် မှန်ကန်တိကျမှုရှိပြီး လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ ကောက်ခံရရှိနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် စာရွက်စာတမ်းများ မှန်ကန်မှု ရှိမရှိ သေချာစွာစစ်ဆေး ကောက်ယူခြင်း
o	Conduct site visits and reference checks at and around client’s business premises to verify business operations.
o	ငွေချေးသူ၏ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုကို အတည်ပြုစစ်တမ်းကောက်ယူနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်း ပရဝဏ် နှင့် အနီးတဝိုက်တွင် သွားရောက်လည်ပတ်စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း
o	Conduct home verification visits and reference checks to verify the residency of potential customers.
o	အလားအလာရှိသော ငွေချေးသူ၏ နေအိမ်သို့သွားရောက်၍ ၎င်းပေးအပ်ထားသည့် အိမ်ထောင်စုပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းစာရင်း အသေးစိတ်ကို စစ်ဆေးခြင်း
o	Evaluate the willingness and capacity to repay of new and existing clients following DAWN’s loan evaluation methodology.
o	Dawn မှချမှတ်ထားသော နည်းလမ်းအတိုင်း ချေးငွေယူသူ အသစ် နှင့် အဟောင်းတို့၏ ပြန်ဆပ်လိုစိတ် နှင့် ပြန်ဆပ်နိုင်စွမ်းများကို ချင့်ချိန်ခန့်မှန်နိုင်ခြင်း
o	Participate in credit committees presenting loan recommendations for approval.
o	ချေးငွေခွင့်ပြုရန် အတွက် ချေးငွေစီစစ် အကဲဖြတ်အဖွဲ့ နှင့် အတူ ဆွေးနွေးထောက်ခံခြင်းများတွင်လည်း ပါဝင်ခြင်း
o	Develop business relationship with clients to support their business success and cultivate loyalty to DAWN.
o	ငွေချေးသူများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရန်အတွက် ငွေချေးသူများနှင့် ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခြင်း
o	Monitor client’s business progress to identify any potential problems.
o	ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ပြဿနာများကို သိရှိနိုင်ရန် ငွေချေးသူ၏ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို စဉ်ဆက်မပြက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း
o	Manage and recover late payments according to institutional procedures.
o	အဖွဲ့အစည်း၏ ချက်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အညီ ငွေနောက်ကျမှု ပြဿနာကိုင်တွင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း
o	Assist to IL Manager to achieve targeted result regarding active borrowers and outstanding loan portfolio of branch
o	ဌာနမှ ချမှတ်ထားသော လျားထားချက်များဖြစ်သည့် ချေးငွေယူသူများ၊ ထုတ်ချေးမည့်ငွေပမာတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းများ ပြည့်မှီနိုင်ရန် အတွက် မန်နေဂျာအား ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း
o	Perform other tasks as assigned by supervisor.
o	ကြီးကြပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တခြားသော တာဝန်များ ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း
o	Myanmar national.
o	University graduate in finance, economics, accounting or related field.
o	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ စီပွားရေး (သို့) ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲရေး (သို့) စာရင်းအင်းတို့ နှင့် ပက်သက်ဆက်နွယ်သော ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
o	One year working experience as microfinance individual loan officer or in retail banking or sales preferably in the specific market segment for the Individual Lending Unit.
o	တစ်ဦးချင်းချေးငွေ အရာရှိရာထူးဖြင့် အနဲဆုံး တစ်နှစ် အတွေ့ကြုံရှိရမည် (သို့) တစ်ဦးအလိုက်ချေးငွေလုပ်ငန်းတွင် တိကျခိုင်မာသော ဈေးကွက်အတွင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ဖူးသော အတွေ့ကြုံ ရှိရမည်။
o	Excellent service and communication skills.
o	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်းအပေါ် အထူးကောင်းမွန်ရမည်။
o	Computer proficiency in word processing and spreadsheets.
o	ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
o	Strong financial analysis skills.
o	ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီစစ်တွက်ချက်မှုများ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရမည်။
o	Strong intuition; able to assess character of potential clients.
o	အလားအလာရှိသော ငွေချေးသူ၏ စရိုက်လက္ခဏာများကို လေ့လာအကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိရမည်
o	Willingness to work in low-income neighborhoods and spend long time in the field.
o	လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်များအတွင်း အချိန်ကြာမြင့်စွာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိရမည်။
Kayin State 94 Days
Kayin State 230 Days